Nyefee na SMS, Music, Kalinda, Video, foto na kọntaktị site na iPhone ka Samsung Cheta 3 / S3 / S4 / S5 / S6 na Ọzọ
2. Nyefee Samsung ka iPhone
3. Nyefee iPhone ka Samsung
Samsung ntị na mbadamba, dị ka Samsung Galaxy S5 na Samsung Cheta 3 kwesịrị ekwesị uzo ozo ka iPhone, n'ihi na ọ na-enye ihe ruuru n'ihi na ị na ịchịkwa ekwentị gị karịa Apple na-eme. Otú ọ dị, na-eme ka ịmafe si iPhone ka Samsung bụ ihe zuru ezu na ogologo usoro, ruru ha iche iche nyiwe. Jiri ya nwayọọ. Here're abụọ mfe ụzọ.
Nkebi nke 1: Nyefee Data si iPhone ka Samsung na MobileTrans na 1 click Part 2. Copy faịlụ site iPhone ka Samsung Galaxy na Samsung Smart Gbanye
Nkebi nke 1: Nyefee Data si iPhone ka Samsung na MobileTrans na 1 click
Gị iPhone na Samsung ekwentị na USB cables
A na kọmputa na iTunes arụnyere Wondershare MobileTrans
Nyefee na kọntaktị site na iPhone ka Samsung Cheta 3 / S6 / S5 / S3 / S4 / S2, wdg
Bugharịa kọntaktsị na Google, Hotmail, Yahoo !, si iPhone ka Samsung.
Detuo music, video, photos, kalenda, na ozi ederede site na iPhone ka Samsung.
Ndabere iPhone ka PC ma nyeghachi Samsung ekwentị effortlessly.
Na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè na Samsung Galaxy S6, S5, S4, S3, Cheta 4, Cheta 3, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, na ndị ọzọ, iOS9 akwado.
Complete data nyefe na a ngwa ngwa ọsọ.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị Wondershare MobileTrans
Download na wụnye Wondershare MobileTrans na kọmputa gị. Agba ya na jikọọ na gị Samsung na ngwaọrụ ma iPhone gị na kọmputa site na abụọ USB cables. Mgbe ahụ, họrọ "na ekwentị ekwentị Nyefee" site isi window nke usoro ihe omume.
Nzọụkwụ 2. Họrọ Data Ị Chọrọ Nyefee
Mgbe ihe omume ahụ na-achọpụta rụọ ma ngwaọrụ gị, jide n'aka na gị Samsung ngwaọrụ bụ ebe onye na gị iPhone bụ isi iyi otu. Ị nwere ike iji "tụgharịa" ịtọ ya ziri ezi. Wee họrọ faịlụ ụdị na ị chọrọ nyefee gị iPhone ka Samsung ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 3. Nyefee Music, Photos, Video, Kalinda, Ndi ana-akpo na SMS si iPhone ka Samsung
Mgbe ihe nile dị njikere, pịa "Malite Copy". The data transfer amalite. Ị na mkpa ichere ruo mgbe dum usoro zuru ezu.
Part 2. Copy faịlụ site iPhone ka Samsung Galaxy na Samsung Smart Gbanye
Samsung Smart Gbanye ™ bụ a freeware, emepụta site Samsung ụlọ ọrụ. Ọ na-eji maka edegharị faịlụ site na iPhone site iCloud / iTunes ndabere ndabere gị Samsunug Galaxy ekwentị seamlessly.
Mfe nzọụkwụ idetuo iPhone ka Samsung
1. Iji iCloud
Nzọụkwụ 1. On gị iPhone, na-aga Ntọala> iCloud na nkwado ndabere gị iPhone na iCloud.
Kwụpụ 2. Gaa Google Play na download na wụnye Samsung Smart Gbanye ™ na gị Samsung Galaxy ekwentị.
Nzọụkwụ 3. Họrọ Import si iCloud na dejupụta gị Apple ID na pasword. Mgbe ahụ, mgbata Ka ịmalite nyefe.
Nzọụkwụ 4. Họrọ gị chọrọ ngwa ọdịnala na wụnye si Google Play.
2. Iji iTunes
Nzọụkwụ 1. Bilie gị iPhone ejikọrọ na eriri USB. Mepee iTunes na iji ya ndabere gị iPhone.
Nzọụkwụ 2. Download na wụnye Samsung Smart Gbanye ™ na kọmputa gị
Nzọụkwụ 3. Run Samsung Smart Gbanye ™ ma họrọ gị iPhone ma họrọ ọdịnaya ị chọrọ nyefee. Mgbe ahụ, pịa Malite Nyefee.
Jiri Samsung Kies nyefee Files
Wụnye, Uninstall & Update Samsung Kies on PC
Wụnye, Update na Uninstall Samsung Kies Mac
Ịgbanwee Data si iOS ka Samsung
> Resource> Samsung> Nyefee SMS, Music, Video, foto na kọntaktị site na iPhone ka Samsung